Odoo CRM အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ရရှိနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများ
BENEFITS OF ODOO CRM Odoo CRM ၏ အကျိုးရလာဒ်များ • Fully integrated with other apps အခြား app များနှင့် တွဲ၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း။ • Flexible to all businesses မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်မဆို သင့်လျော်ခြင်း။ • Accessible လေ့လာရလွယ်ကူခြင်း။ • Easy to use သုံးရလွယ်ခြင်း။ • Excellent communication tool စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အလ...
CRM (Customer Relationship Management) System အသုံ့းပြု၍ သည်ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာများ စီမံခန့်ခွဲ ခြင်း။
Latmat.com.mm (Online Event Ticketing Platform) ကိုအသုံးပြု၍ အောင်မြင်တဲ့ ပွဲတစ်ခုစီစဉ်ခြင်း။
Latmat.com.mm (Online Event Ticketing Platform) ကိုအသုံးပြု၍ အောင်မြင်တဲ့ ပွဲတစ်ခုစီစဉ်ခြင်း။ အောင်မြင်တဲ့ ပွဲတစ်ခုဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက် Event စီစဉ်သူတွေအနေနဲ့ မည်ကဲ့သို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့စိတ်ကူးထားပါသလဲ?
Odoo ERPဆိုတာဘာလဲ? ERP ဆိုတာကတော့ Enterprise Resource Planning System ပါ။ SAP, Sage, Microsoft Dynamics, NETSUITE, Odoo စတဲ့ လူသုံးများတဲ့ ERP Solution တွေရှိပါတယ်။ ယခုမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ Odoo ERP ပဲဖြစ်ပါတယ်။။
ERPဆိုတာဘာလဲ? ERP systemဆိုတာကတော့ Enterprise Resource Planning ကိုခေါ်တာပါ။ ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကို ထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ရန် ခန့်ခွဲထားသော စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
We are pleased to announce that through collecting your feedback for Judgify and gaining extensive experience in the event industry, we have launched three new award plans to match your industry needs:
First of all, we as GCA team, wish everyoneaprosperous and happy new year!
Global Connect Asia powered the ASOCIO ICT SUMMIT 2016
We are thrilled to announce that Global Connect Asia (GCA) powered the Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) ICT SUMMIT 2016 in Yangon, Myanmar from the 14th to 16th of November. Last year, this event was held as "ASOCIO PIKOM ICT Leadership Summit 2015" in Malaysia and this year, our country was seen hosting the event for the...